Basikety – Coupe du Président : Tompondaka ny ASCB sy ny Fandrefiala -
AccueilRaharaham-pirenenaBasikety – Coupe du Président : Tompondaka ny ASCB sy ny Fandrefiala
10/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy nampoizina. ASCB (Boeny) teo amin’ny lehilahy raha ny Fandrefiala (Analamanga) teo amin’ny vehivavy. Ireo no voahosotra ho tompondakan’ny fiadiana ny « Coupe du Président » , taranja basikety, andiany fahatelo. Tontosa ny sabotsy 8 Avrily teo, tetsy amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina mantsy ireo lalao famaranana sady fanakatonana ny “Coupe du Président”.
Teo amin’ny lehilahy, adin’ny samy ekipan’i Boeny ny lalao famaranana. Lavon’ny ASCB tamin’ny isa mazava, 80 noho 71, ny SBBC. Niady hatramin’ny farany ny fihaonan’ny roa tonta tamin’izany.
Ankoatra izay, niatrika “match de gala” ihany koa ny mpanao gazety mpikirakira politika mivondrona ao amin’ny Association des Chroniquers Politique na Achropol. Ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fanatanjahantena (MJS) no nifanandrina tamin’izy ireo tamin’izany. Resin’ny MJS tamin’ny isa mavesatra, 101 noho 30, ny Achropol.
Teo amin’ny sokajy vehivavy indray, ekipan’Analamanga avokoa no niatrika ny lalao famaranana. Resin’ny Fandrefiala tamin’ny moka fohy, 49 noho 48, ny MB2ALL. Niady ihany koa ny fihaonan’ny roa tonta ary nifanenjika hatrany ny isa.
Raha ny fizotry ny fifaninanana tamin’ny ankapobeny, feno hipoka ny Lapan’ny Fanatanjahantena tamin’izany ary tonga nanotrona ny lalao famaranana ny Filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina mivady. Maro ihany koa ny fampisehoana tao an-toerana niarahana tamina mpanakanto maromaro, toa an’i Jerry Marcos sy Jess Flavi One sy Meizah ary Mijah. Nisy fifaninanana isankarazany, toa ny “tirs à 3 points”, sns.